Isigama sokuThengisa kwi-Intanethi: Iinkcazo ezisisiseko | Martech Zone
Isigama sokuThengisa kwi-Intanethi: Iinkcazo ezisisiseko
NgoLwesibini, nge-15 kaDisemba ngo-2020 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha siyalibala ukuba singene nzulu kangakanani kwishishini kwaye silibale ukunika umntu nje intshayelelo kwisigama esisisiseko okanye izifinyezi ezijikelezayo xa sithetha ngentengiso ekwi-Intanethi. Ngethamsanqa kuwe, Qhubeka ukudibanise oku Ukuthengisa kwi-Intanethi 101 infographic okuhamba kuko konke okusisiseko isigama sentengiso Kuya kufuneka ubambe incoko kunye nengcali yakho yentengiso.
umanyaniso Marketing -Ufumana amaqabane angaphandle athengise imveliso yakho kubaphulaphuli babo bekhomishini.
Izibhengezo zeBhanner -Ubamba ingqalelo yabathengi ekujoliswe kubo ukuze bacofe ukutyelela indawo yakho okanye babe nolwazi ngakumbi ngophawu lwakho.
Uguqulelo lwesiqulatho -Sifts ngomkhukula womxholo we-intanethi kunye nezinto ezikhethwe ngesandla ezikumgangatho ophezulu oza kwabelana ngazo, usenza indawo yokuma kweendaba emileyo kwilungu ngalinye lentengiso ojolise kuyo.
UkuThengiswa kweMpahla -Uvelisa umxholo oluncedo, onomdla, kunye nokonwabisa okunjengeebhlog, iiposti, iividiyo kunye ne-infographics ukutsala umdla ngakumbi, ukwakha igunya lophawu, kunye nokuphumelela ishishini elitsha.
Umxholo weNtengiso -Bonisa iintengiso kwiwebhusayithi ethile esekwe kumxholo wayo, okanye ikhonkco lamagama athile kwigama lomthengisi.
UkuSebenza kweNqanaba lokuGuqulwa - isebenzisa kubahlalutyi kunye nengxelo yomsebenzisi yokuphucula iwebhusayithi yakho kunye nokuguqula izikhangeli zibe ngabathengi abahlawulayo.
Marketing yedijithali -Udala amava omthengi angenamthungo, amanyeneyo kumajelo ohlukeneyo edijithali- kubandakanya iselfowuni, imidlalo, kunye neeapps, iipodcast, irediyo ye-Intanethi, imiyalezo ye-SMS, nokunye okuninzi.
Bonisa iiNtengiso -Ubamba ingqalelo yabathengi ekujoliswe kubo ukuze bacofe ukutyelela indawo yakho okanye babe nolwazi ngakumbi ngophawu lwakho.
Imidiya eFumanekileyo -Ukuba abathengi basasaza i-buzz kuwe ngegama lentsholongwane.
email Marketing -Ithumela imiyalezo eluncedo, efanelekileyo, yemeyile kubamkeli ukuyigcina ibandakanyeka kunye nenkampani yakho kunye nokwakha uphawu lokunyaniseka.
Marketing Inbound -Kutsala, ukukhulisa, ukwazisa, kunye nokwazisa abathengi abanokubakho ngokubandakanya umxholo, i-SEO yobuchwephesha, kunye nezixhobo ezisebenzisanayo, ukuphumelela ishishini kunye nokufumana ukuthembeka kwabathengi.
Ukuthengisa -Ukwakha ubudlelwane neqela elikhethiweyo labantu abanefuthe kwizigqibo zakho zokuthenga.
Ukukhokelwa kweNkokeli -Ukwakha ubudlelwane kunye nezikhokelo ezingakulungelanga ukuthenga ngomxholo onomdla, ii-imeyile eziluncedo, ukubandakanyeka kwimidiya yoluntu.
Khokelela amanqaku -Ukuhlalutya indlela ekhokelayo yokuziphatha kwi-Intanethi ukulinganisa inqanaba labo lomdla kwimveliso yakho, ukwabela amanqaku ukulandelela isikhundla somthengi ngamnye ekunokubakho kwintengiso.
YokuThengisa -Izenzekelayo imisebenzi yokuthengisa ephindaphindwayo kwaye ikwazise kwangoko kwiindlela ezithile zokuziphatha zabathengi ukukunceda ufumane umyalezo olungileyo oza kuwuthumela kumntu olungileyo ngexesha elifanelekileyo.
UkuThengiswa kweSelula -Uthumela imiyalezo ye-SMS eyenziwe ngokwezifiso, ukutyhala izaziso, iintengiso ze-in-app, ukuskena ikhowudi ye-QR, nokunye okuninzi kwizixhobo zeefowuni zabathengi ezisekwe kwindlela ethile yokuziphatha, njengendawo okuyo ngoku okanye ixesha losuku.
Intengiso yaBantu -Yila umxholo wokuhlela owenzelwe ukuhambelana nendawo ethile yomshicileli kwi-Intanethi, emva koko uhlawule ukuyibeka ecaleni kwamanye amanqaku esiza.
Ubudlelwane boluntu kwi-Intanethi -Iimpembelelo kwimithombo yeendaba ezikwi-intanethi nakwindawo esihlala kuzo, zigcina iso kwinto ethethwa ngabantu malunga nenkampani ekwi-intanethi kwaye ijonge iindlela ezintsha zokunxibelelana nabathengi.
Imithombo yeendaba engumnini - indawo yakho ethengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi: iwebhusayithi esemthethweni, indawo ehambayo, ibhlog kunye namaphepha eendaba ezentlalo
Imithombo yeendaba ehlawulelweyo Intengiso ehlawulelweyo, izithuba ezixhasiweyo, okanye ukukhangela okuhlawulelweyo.
Ukuhlawula ngokucofa (PPC) -Iithagethi zabathengi abathile ngokusebenzisa amakhonkco axhasiweyo, kunye novavanyo lwe-A / B ukubona ukuba zeziphi na iziphumo zentengiso kunqakrazo olungakumbi.
Ukumaketha kwakhona -Ijolise kwiintengiso kubantu esele betyelele indawo yakho (kodwa khange bathenge) ngokuthumela imiyalezo elungiselelwe okanye ukunikezelwa okukhethekileyo.
Intengiso yeeNjini zokuKhangela (SEM) -Ukuphucula ukubonakala kwesiza kumaphepha eziphumo zeinjini yokukhangela, ukukhulisa inqanaba lesiza nge-SEO, ukugcwala kunye neelinki zangasemva.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando (SEO) -Ukufakwa kwamagama aphambili okukhangela kwiphepha lewebhu lenkampani ukukhulisa iziphumo zokukhangela kwiinjini yokukhangela, kwaye uqiniseke ukuba indawo yakho ilungiselelwe ukuhamba, umxholo, kunye negama eliphambili elinobutyebi beemeta, kunye nekhonkco elingena ngaphakathi.
Iintengiso zentlalo -Yandisa ukufikelela kwenkampani yakho kubaphulaphuli abatsha ngentengiso ehlawulelweyo okanye izithuba ezikhuthaziweyo kwiindawo ezahlukeneyo zosasazo lwasekuhlaleni.
Social Media Marketing -Ukonyusa ulwazi lwebrand kunye nokugcwala kwesiza ngokwakha indawo ekuhlala kuyo abathengi ngeendaba zosasazo., Ukuthumela uhlaziyo oluya kusasazeka ngendlela eyiyo, kunye nokuphendula kwizikhalazo, izicelo kunye nendumiso.
Ukwahlula uvavanyo -Luvavanyo olungahleliwe apho okwahlukileyo kukhoyo ngo-A / B kuvavanywa iqela elilawulayo elingaboniyo ukuze ubone ukuba zeziphi na iziphumo ezinempumelelo.
Okuxhaswayo -Yila umxholo wokuhlela owenzelwe ukuhambelana nendawo ethile yomshicileli kwi-Intanethi, emva koko uhlawule ukuyibeka ecaleni kwamanye amanqaku esiza.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lethu lokudibana Qhubeka kweli nqaku.
tags: urhwebo umanyanisoiintengiso zebhankiumxholo wekharityhulamUkuThengiswa kweMpahlaiintengisoUkuguqulwa kwenqanaba lokuguqulaukuthengiswa kwedathabonisa iintengisoeendaba ezuziweyoemail Marketingurhwebo inboundukuthengisa okunempembelelokhokelaukukhokela amanqakuimigaqo yokwenzaukuzenzekela ngokuzenzekelayoisigama sentengisourhwebo mobileintengiso yemveliunxibelelwano noluntu kwi-IntanethiabeendabaImidiya ehlawulwayoHlawula ngokucofa kanyePPCukumakethayokukhangela injinienjini yokukhangela nounSEOIintengiso zentlalointengiso yoluntuSocial Media Marketingukwahlula uvavanyoUmxholo oxhasiweyo
Yeyiphi into enokwenzeka ukuba iSicwangciso-qhinga sakho sezeNtlalo siza kubonelela ngembuyekezo kutyalo mali?